साढे दुई करोड कोरोना खोप नेपाल आउने सरकार बेखवर व्यापारीले ल्याउने - NewsCenterNepal.com
साढे दुई करोड कोरोना खोप नेपाल आउने सरकार बेखवर व्यापारीले ल्याउने
काठमाडौं ।- नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको साढे २ करोड डोज खोप नेपाल आउने खबरले मंगलबार एकाएक बजार तात्यो । यस्तो खबर आउनुको कारण हो, रसियन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (आरडीआईएफ) ले गरेको घोषणा ।
रुसले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप स्पुतनिक–५ नेपाल ल्याउनका लागि सहमति भएको छ । दुई करोड ५० लाख खोप नेपाल ल्याउनका लागि रसियन टाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड (आरडीआईएफ) र नेपालको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्स कम्पनीबीच सम्झौता भएको आरडीआईएफ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
कोभिडविरुद्ध रसियाले परीक्षण गरिरहेको खोप ‘स्पुतनिक फाइभ’ नेपाल आउने समाचार विश्वभर फैलिएको छ । सरकारी पहुँच प्रयोग गरेर एक निजी कम्पनीले व्यापारका लागि खोप ल्याउने सम्झौता गरेको छ । महामारीविरुद्धको खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हटेको छ
भी’ नोवेल कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन हो । यो भ्याक्सिन आरडीआईएफको सहयोगमा सञ्चालित गामालेया नेशनल रिसर्च सेन्टरले उत्पादन गर्दैछ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्पुतनिक–भी भ्याक्सिनबारे आफूहरूसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताउनु भयो ।
नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ होला भ्याक्सिन ?
अहिलेको प्रक्रियाअनुसार मोटामोटी भ्याक्सिन नेपाल आउन जनवरी–फेबु्रअरी लाग्छ । भ्याक्सिन आएपछि हामी पछाडि पर्छाैँ कि भनेर हामी क्युमा बसेका हौँ । एलसी खोल्नकै लागि आयात अनुमतिपत्र चाहिन्छ । त्यसकारण सबैबाट स्वीकृत नभई ल्याउने सम्भावना छैन । धेरै प्रक्रिया पूरा हुनै बाँकी छ ।